China Steel Tool Safety Spring Lanyard Mamoaka haingana ny Lobster Clips manohitra ny famokarana sy ny famokarana very | Spocket
Fitaovam-piarovana vy amin'ny lohataona Lanyard Mamoaka haingana ny lozisialy Lobster manohitra very
Laharana maodely: CTL-104
Antsipirian'ny fonosana: Kitapo be / bundle / PE, baoritra manondrana
Fotoana fanaterana: 8-10 andro fiasana
Loko mafana 5 miady amin'ny vy very amin'ny fitaovam-piarovana amin'ny lohataona Lanyard mamoaka haingana ny clip Lobster
Ny lanyard amin'ny lohataona fitaovana fiarovana dia singa fiarovana lehibe iray. Izy io dia miantoka ny fifandraisanao amin'ny sanganasao foana, ny clip famoahana haingana dia mamela fifandraisana mora, miaro ny fitaovanao latsaka, milatsaka, very, sns.
Coiled mahazatra: 160mm
Tsy voafolaka: 2m
Faranana: lobster clip 2pcs
Function: atsaharo ny fianjeran'ireo fitaovana
Loko: mangarahara mainty, mena, manga, maintso, mavo
Tombony: fahatsiarovana miavaka, fahaiza-miavaka ambony, fanarenana elastika haingana
OEM: misy karazana, habe, loko isan-karazany
MOQ: 200 pcs isaky ny loko
Sampana tahiry ao anatin'ny 1-3 andro, fiampangana santionany maimaimpoana
Sampana vaovao ao anatin'ny 5-7 andro, ampidiro ny santionany
Ny fandefasana ny fandefasana santionany dia amin'ny vidin'ny mpanjifa
kofehy fitaovana, habe, loko, kojakoja, fonosana
Fanaraha-maso avo lenta
1. Inona ny MOQ-nao?
Matetika ny MOQ-tsika dia 1.000 pcs. Fa izahay dia manaiky habetsaha kely ho an'ny kaomandin'ny fitsarana anao. Aza misalasala milaza aminay ny habetsaky ny zavatra ilainao, hikajiana ny vidin'ny fifaninanana indrindra izahay, ny hopingyou dia hametraka baiko lehibe aorian'ny fizahana ny kalitao sy ny serivisinay amin'ny fifanarahana voalohany.
2. Mandra-pahoviana ny fotoana fitarihana santionany?
Ho an'ireo santionan'ny tahiry, mila 2-4 andro. Ny sasany amin'izy ireo dia maimaim-poana. Raha tianao ny volavolanao manokana, dia afaka 5-7 andro eo ho eo, arakaraka ny vokatra samihafa ilainao. Na inona izany na inona, dia hanao izay tsara indrindra vitantsika isika hamita azy io faran'izay haingana.
3. Mandra-pahoviana ny fotoana fitarihana famokarana?
Raha ny mahazatra dia maharitra 10-15 andro, izay miankina amin'ny habetsanao sy ny entana nohamarininay.
4. Inona no fomba fanamboaranao?
Mampiasa fonosana fanondranana mahazatra izahay, amin'ny alàlan'ny kitapo / boaty ary baoritra ho an'ny vokatra samihafa, na manao fonosana namboarina ho fangatahanao.
5. Inona ny fe-potoana ara-barotrao?
Matetika izahay manome soso-kevitra ny CFR / CIF na CPT amin'ny serivisinay mandroso tsara indrindra, OK ihany koa ny FOB / EXW, toa ny fangatahanao rehetra.
Ny fe-potoana fandoavanay mahazatra dia T / T amin'ny kaontin'ny orinasanay, vola kely dia heken'ny Paypal na Western Union.
7. Ahoana ny fomba fandefasana anao?
Raha ny tokony ho izy dia baoritra maromaro miaraka amin'ny fandefasana haingana, mazàna izahay dia mampiasa fandefasana entana, toa ny DHL, FedEx, UPS, TNT, raha toa ka misy kargôzy marobe toa ny GW mihoatra ny 100kg, LCL amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra, amin'ny alàlan'ny lalamby no misy rehetra, arakaraka izay ilainao rehetra.
Teo aloha: Ny fiarovana nylon fototra volomparasy azo antoka Lanyard atsaharo ny fampidinana fitaovana ho an'ny fiasana amin'ny haavony
Manaraka: Magic Fishing Flexible Coil Lanyard Leash Steel Reinforced Load 50KG
Deluxe Spring Coiled Lanyard Cord amin'ny fametahana ...